आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस वा फोटोमा लाईक बढाउने सजिलो उपाय « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस वा फोटोमा लाईक बढाउने सजिलो उपाय
ओएस नेपाल काठमाडौ ६ फागुन – तपाई हामी सबैले देखेको भोगेको कुरा हो फेसबुक एकाउन्टमा जति धेरै साथिहरु भएतापनि आफूले पोस्ट गरेको स्ट्याटस वा फोटोमा निकै कम लाईक आउँदा दिक्क हुने गर्छौ ? यसको कारणहरु : कि त तपाईका साथिहरुले तपाईलाई वास्ता गर्दैनन कि त तपाईको स्ट्याटस् उनीहरुको News Feed मा देखिदैँनन् । तैपनि अब चिन्ता चाहिँ नलिनुस् , यो लेखबाट तपाईले आफूले फेसबुकमा पोस्ट गरेका स्ट्याटस् र फोटोमा टन्नै लाईक कसरी देखाउने ( पक्कै पनि देखाउनकै लागि हो ) भन्ने बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ ।
मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको likelo.com को बारेमा हो, जसबाट तपाईले एउटा status वा photo मा ४०/४५ देखि १००/२०० सम्म लाईक सित्तैमा पाउनुहुनेछ । Step 1 सबैभन्दा पहिले तपाईले फेसबुकमा subscriber फिचर enable गर्नुपर्छ । जसको लागि यहाँ गएर गर्न सक्नुहुन्छ । Step2आफ्नो स्ट्याटस् वा फोटो अपलोड गर्नुहोस् । पोस्टको प्राईभेसी Public बनाउन नबिर्सनुहोला । Step3त्यसपछि ब्राउजरमा www.likelo.com खोल्नुहोस् । त्यहाँ तपाईले “Click Here”
लेखिएको देख्नुहुन्छ । त्यहाँ क्लिक गरेपछि “Xperia smart phone पेज” मा पुग्नुहुनेछ । त्यो पेजको माथिपट्टि रहेको “Install” बटनमा क्लिक गरेपछि Success म्यासेजसहितको नयाँ पेज खुल्नेछ । Step4address bar बाट त्यो success पेजको लिँक (url) कपि गर्नुहोस् । Step5त्यो कपि गरिएको url लाई likelo.com को होमपेको फिल्ड मा राखेर Submit गर्नुहोस् । अब तपाईले आफ्ना स्ट्याटसहरुको लिस्ट देख्नुहुनेछ । चाहेको स्ट्याटस रोजेर Submit मा क्लिक गर्नुहोस् । तपाईले फोटो पनि रोज्न सक्नुहुन्छ । अब १/२ मिनेटपछि आफ्नो स्ट्याटस् हेर्नुहोस , टन्नै लाईक बढेको देख्नुहुनेछ । तर यसको नोटिफिकेशन भने पाउनुहुन्न । तपाईले आफ्नो स्ट्याटस लाईक गरेकाहरुको प्रोफाईल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ । यसबाट एउटा स्ट्याटसको एकपटक मात्र लाईक बढाउन सकिन्छ तर सयौँ स्ट्याटसहरुमा बढाउन सकिन्छ ।(khabarsansani)
काठमाडौँ – नेपाल टेलिकमले ‘कोभिड–१९’ को सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले जिएसएम मोबाइल
पैसाबाट पनि सर्न सक्छ कोरोना: पैसालाई यसरी कीटाणुमुक्त गराउन सकिन्छ !
काठमाडौँ, १ चैत – साको माध्यमबाट कोभिड–१९ (कोरोना) सर्ने खतरा देखिएपछि छिमेकी मुलुक चीनमा गत
दाङमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने तयारी
नारायणपुर – दाङमा स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा मानिएको हावाबाट बिजुली निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । दाङको
टेलिकमले डाटा सेवा प्रभावकारी बनायो, के छ नयाँ सुविधा ?
काठमाडौँ – नेपाल टेलिकमले जिएसएम मोबाइल सेवाको प्रणाली अध्यावधि गरी डाटा सेवालाई प्रभावकारी बनाएको जनाएको